China Acetonitrile manufacturing and Factory | olona afaka
CAS tsia: 75-05-8
Tsena: Eoropa / India
Fisehoana: ranon-javatra mangarahara
Fahadiovana: 99,9% min
Rano: 0,03% max
Loko (Pt-Co): 10 max
Asidra Hydrocyanic (mg / kg): 10max
Acétone (mg / kg): 25max
150kg / amponga, 12Mt / FCL na 20mt / FCL
UN No.1648, Kilasy: 3, vondrona fonosana: II
☑Fandinihana momba ny kemika sy famakafakana fitaovana. Acetonitrile dia mpanova organika sy solvent ho an'ny chromatography sosona manify, chromatography taratasy, fanadihadiana spectroscopic ary polarographic tato anatin'ny taona vitsivitsy. Satria ny acetonitrile ny fahadiovana avo lenta dia tsy mandray hazavana ultraviolet eo amin'ny 200nm ka hatramin'ny 400nm, novolavolaina ho solvent ho an'ny chromatography ranon-javatra avo lenta (HPLC) miaraka amin'ny fahatsapana 10-9.
☑Solvent ho an'ny fitrandrahana sy famokarana hydrocarbon. Ny acetonitrile dia solvent be mpampiasa, izay matetika ampiasaina amin'ny distillation fitrandrahana mba hampisaraka ny butadiene amin'ny hydrocarbons C4 Ny acetonitrile dia ampiasaina ihany koa amin'ny fisarahan'ny hydrocarbons hafa, toy ny fanasarahana ny propylene, isoprene ary methylacetylene amin'ny sombin-tany hydrocarbon. Ny acetonitrile dia ampiasaina ihany koa amin'ny fisarahana manokana, toy ny fitrandrahana asidra matavy amin'ny menaka legioma sy menaka atody cod, ka ny menaka voatsabo dia maivana, madio ary manatsara ny fofona, ary mijanona tsy miova ny votoatin'ny vitamina. Ny acetonitrile koa dia be mpampiasa ho solvent amin'ny departemanta fanafody, pestiside, lamba ary plastika.
☑ Mpanelanelana amin'ny fanafody syntetika sy pestiside. Ny acetonitrile dia azo ampiasaina hanamboarana ny mpanelanelana amin'ny fanafody sy famonoana bibikely maro. Amin'ny fanafody, izy io dia ampiasaina hanamboarana andian-dahatsoratra mpanelanelana amin'ny fanafody toy ny vitamina B1, metronidazole, ethambutol, aminopteridine, adenine ary kohaka diphenyl; amin'ny famonoana bibikely, dia ampiasaina hanamboarana bibikely pyrethroid, ethoxycarb ary mpanelanelana amin'ny famonoana bibikely hafa.
☑Famadio herisetra. Acetonitrile dia solvent organika misy polarity matanjaka. Izy io dia manana fahaleovan-tena tsara ho an'ny menaka, sira tsy an-tongotra, zavatra biolojika ary fitambaran'ny molekiola avo. Izy io dia afaka manadio menaka, savoka, dian-tànana, solika manimba ary residue flux amin'ny silaka wafer. Noho izany, ny acetonitrile amin'ny fahadiovana avo lenta dia azo ampiasaina ho mpitsabo mpanadio semiconductor. ☑Fampiharana hafa: Ho fanampin'ireo fampiharana etsy ambony, ny acetonitrile dia azo ampiasaina ho akora simika ho an'ny synthesie organika, catalyst na singa iray an'ny catalyst complex metal. Ho fanampin'izany, ny acetonitrile dia ampiasaina ihany koa amin'ny fandokoana lamba sy ny firakotra manarona, ary koa mampiorina tsara ny solvent klorida
Company Orinasam-panjakana manana traikefa mihoatra ny 30 taona;
Factory Factory avo lenta HSE;
☑ Vokatra nankatoavin'ny orinasa maro fanafody any Eropa;
☑ Misy naoty elektronika
Teo aloha: 1-Methylimidazole
Manaraka: 2,6-Diethyl-4-methylaniline (DEMA)